राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. पुष्प कँडेल नियुक्त
२o७५ बैशाख ११ मंगलबार
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. पुष्प कँडेललाई नियुक्त गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रा.डा. कँडेललाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको सूचना तथा संचार प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार आयोगको सदस्यमा डा. कृष्णरसद ओली, प्राध्यापक उषा झा, मीनबहादुर शाही, गिरिबहादुर गुरुङ, रामकुमार फुँयाल र इन्जिनियर सुशील भट्टलाई नियुक्ति गरेको छ ।
इथियोपियाको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको बाहुल्य
आदिस अबाबा। इथोयोपियाका प्रधानमन्त्री अबिय अहमदले मन्त्रिपरिषदको आकार साना बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । तर उहाँले मन्त्रिपरिषदका आधा सदस्य महिला राखेका छन् । बीस सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका मुख्य मन्त्रालयहरुमा महिलालाई जिम्मेवारी दिइएको
काठमाडौँ। सरकारले शैक्षिक जनशक्ति र शिक्षा प्रणालीको पुनःसंरचनाका निम्ति सुझाव प्रस्तुत गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले नेपालका लागि आवश्यक
मन्त्रिपरिषद बैठकले के के निर्णय गर्यो ?
काठमाडौँ। सरकारले पत्रकारहरुको न्यनूतम् पारिश्रमिक २५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको छ। आइतवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पत्रकारहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिकबाट लागू हुने गरी
काठमाडौँ। सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको छ । ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत